Alaab-qeybiyeyaal iyo Warshad Nidaam Kaydiya Si Buuxda U Shaqeeya | Shiinaha Soosaarayaasha Nidaamka Kaydinta ee Si Buuxda U Shaqeeya
Marinka wiishka 'Stacker crane' ee marinnada wiishka ee labada dhinacba. Xalkani wuxuu yareynayaa wadarta kharashka iyadoo la bixinayo keyd cufnaan sare, wuxuuna si buuxda uga faa'iideysanayaa booska sagxadda iyo booska toosan.
Nidaamka keydinta otomaatiga ah iyo dib u soo celinta (AS / RS) badanaa wuxuu ka kooban yahay sagxadaha dhaadheer, wiishashka wax lagu dhejiyo, gawaarida wax lagu raro iyo nidaamka xakamaynta bakhaarka kuwaas oo dhexgalaya nidaamka maaraynta bakhaarka.
Gawaarida 4-Way waa qalab otomaatig ah oo loogu talagalay nidaamka kaydinta cufnaanta sare. Iyada oo loo marayo dhaqdhaqaaqa 4-ka ah ee gawaarida iyo heerka wareejinta xamuulka ee salka ku haya, otomaatiga bakhaarka ayaa lagu gaarayaa.